Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Kacdoon Hada Ka Socda Degmada Ayshyca
Deg Deg: Kacdoon Hada Ka Socda Degmada Ayshyca
Wararka naga soo gadhaya gudaha Ogadenia gaar ahaan Gobalka Shiniile ayaa sheegaya in saaka mudahaaraado gumaysiga iyo gacanyara yaashiisa lagu diidan yahay ka socdaan degmada ayshica iyo deganada kuxeeran.
Sida uu Warku nagusoo gaadhay waxaa saaka isku soo bax dadwayne kadhacay dagmada Ayshica iyo tulooyin hoos yimaado dagmadaasi. Waxaana kamida meelaha ay hada muhadaraadku kasocdo. Dhagaga. Biya qaboobe iyo laas xadhaadh oo kawada Tirsan dagmada ayshica ee gobalka Shiniile.
Guud ahaan wadanka Ogadenia ee gacanta gumaysiga kujira ayaa waxaa todobaadan si xawliya uga socda kacdoon shacab oo lagu diidan yahay gumaysiga itobiya iyo canaasiirta ushaqaysa ee fadhigoodu yahay magalada jigjiga.